राज्यको युग नै वचनको युग हो | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
राज्यको युगमा, परमेश्‍वरले नयाँ युगको प्रारम्भ गर्न, आफूले गर्ने कामका साधनहरू परिवर्तन गर्न, र सम्पूर्ण युगको काम गर्न वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। वचनको युगमा परमेश्‍वरले यही सिद्धान्तद्वारा काम गर्नुहुन्छ। फरक-फरक दृष्टिकोणहरूबाट बोल्न उहाँ देह बन्‍नुभयो, ता कि मानिसले देहमा वचनको रूपमा प्रकट हुनुभएको परमेश्‍वरलाई साँच्चिकै हेर्न सकून्, र उहाँको बुद्धि र आश्‍चर्यजनकता देख्न सकून्। यस्ता काम मानिसलाई जित्‍ने, मानिसलाई सिद्ध पार्ने, र मानिसलाई हटाउने लक्ष्यहरू अझै राम्ररी प्राप्त गर्नलाई गरिन्छ, जुन वचनको युगमा काम गर्न गरिने वचनको प्रयोगको सही अर्थ हो। यी वचनहरूद्वारा मानिसहरूले परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव, मानिसको सार, र मानिस जेमा प्रवेश गर्नु पर्ने हो त्यो थाहा पाउँछन्। वचनहरूद्वारा परमेश्‍वरले वचनको युगमा गर्ने चाहना गर्नुभएको कामलाई यसको पूर्णतामा साकार बनाइन्छ। यी वचनहरूद्वारा, मानिसहरूलाई पर्दाफास गरिन्छ, हटाइन्छ, र जाँचिन्छ। मानिसहरूले परमेश्‍वरका वचनहरू देखेका छन्, यी वचनहरू सुनेका छन्, र यी वचनहरूको अस्तित्व चिनेका छन्। परिणामस्वरूप, उनीहरूले परमेश्‍वरको अस्तित्वमा, परमेश्‍वरको सर्वव्यापकता र बुद्धिमा, साथै मानिसको लागि परमेश्‍वरको प्रेममा र मानिसलाई मुक्ति दिने उहाँको इच्‍छामा विश्‍वास गर्न थालेका छन्। “वचनहरू” भन्ने शब्द सरल र सामान्य हुन सक्ला, तर देहधारी परमेश्‍वरका मुखबाट बोलिएका वचनहरूले ब्रह्माण्ड हल्लाउँछन्, तिनीहरूले मानिसहरूका हृदय बदलिदिन्छन्, उनीहरूका धारणाहरू र पुराना स्वभावहरू बदलिदिन्छन्, र सम्पूर्ण संसार प्रकट हुने तरिकालाई बदलिदिन्छन्। युगौँ-युगदेखि, आजका परमेश्‍वरले मात्र यस प्रकारले काम गर्नुभएको छ, र केवल उहाँ मात्रै यसप्रकारले बोल्नुहुन्छ र यसप्रकार मानिसलाई मुक्ति दिन आउनुहुन्छ। यो समयबाट अगाडि मानिस परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा निर्देशित र पोषित भएर उहाँका वचनहरूको मार्गदर्शनको अधीनमा जिउँछ। मानिसहरू परमेश्‍वरका वचनहरूको संसारमा, परमेश्‍वरका वचनहरूको श्रापहरू र आशीर्वादहरूको माझ जिउँछन्, र अझ धेरै मानिसहरू त उहाँका वचनहरूका न्याय र सजाय अन्तर्गत जिउन थालेका छन्। यी वचनहरू र यो काम पूर्ण रूपमा मानिसको छुटकाराको लागि, परमेश्‍वरको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि, र पुरानो सृष्टिको संसारको मूल स्वरूप परिवर्तन गर्नको लागि हुन्। वचनहरू प्रयोग गरेर परमेश्‍वरले संसारको सृष्टि गर्नुभयो, वचनहरू प्रयोग गरेर नै उहाँले मानिसहरूलाई ब्रह्माण्डभरि अगुवाई गर्नुहुन्छ, र वचनहरू प्रयोग गरेर नै उहाँले उनीहरूलाई जित्‍नुहुन्छ र मुक्ति दिनुहुन्छ। अन्ततः, उहाँले पुरानो सम्पूर्ण संसारलाई अन्त्य गर्न वचनहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ र उहाँको व्यवस्थापन योजनाको सम्पूर्णतालाई पूरा गर्नुहुनेछ। राज्यको युगभरि नै, परमेश्‍वरले आफ्नो काम गर्न, र आफ्नो कामका नतिजाहरू प्राप्त गर्न वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले अचम्‍मका कामहरू गर्नुहुन्न वा आश्‍चर्यकर्महरू प्रस्तुत गर्नुहुन्न, तर वचनहरूद्वारा केवल आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूको कारणले, मानिसलाई पालनपोषण गरिन्छ र जुटाइन्छ, अनि उसले ज्ञान र सच्चा अनुभव प्राप्त गर्छ। वचनको युगमा, मानिस असाधारण रूपमा आशिषित भएको छ। उसले कुनै शारीरिक पीडा भोग्दैन, र केवल परमेश्‍वरका वचनहरूको प्रचुर आपूर्तिमा रमाउँछ। अन्धाधुन्ध तरिकाले खोज्ने वा अन्धाधुन्ध तरिकाले यात्रा गर्ने आवश्यकता नै नपरी, उसका सहजताका बीचबाट, उसले परमेश्‍वरको स्वरूप देख्छ, आफ्नै मुखबाट उहाँ बोलेको सुन्छ, उहाँले जे दिनुहुन्छ त्यो लिन्छ, र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा नै आफ्‍नो काम गरिरहनुभएको देख्छ। युगौं अघिका मानिसहरू यी चीजहरूमा रमाउन पाएका थिएनन्, र तिनीहरूले कहिल्यै पाउन नसकेका आशिष्‌हरू यीनै हुन्।
परमेश्‍वरले मानिसलाई पूर्ण पार्ने संकल्प गर्नुभएको छ, र जुन दृष्टिकोणबाट उहाँ बोल्‍नुभए पनि, यो सबै मानिसहरूलाई सिद्ध पार्नको लागि हो। आत्माको दृष्टिकोणबाट बोलिएका वचनहरू मानिसहरूको लागि बुझ्न कठिन छन्; बुझ्नको लागि उनीहरूको क्षमता सीमित भएकाले, उनीहरूसँग अभ्यासको मार्ग पत्ता लगाउने साधनहरू छैनन्। परमेश्‍वरको कामले फरक-फरक प्रभावहरू पार्छ गर्छ, र कामको हरेक कदमको पछाडि उहाँको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ। यसका अलाबा, उहाँले फरक-फरक दृष्टिकोणहरूबाट बोल्न अत्यावश्यक छ, किनकि यसो गरेर मात्र उहाँले मानिसलाई सिद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले आत्माको दृष्टिकोणबाट मात्र आफ्नो वचन बोल्नुथियो भने, परमेश्‍वरको कामको यो चरण पूरा गर्ने कुनै मार्ग हुने थिएन। उहाँले बोल्ने शैलीबाट, तैँले के देख्न सक्छस् भने, मानिसहरूको यो समूहलाई सिद्ध पार्न उहाँ दृढ हुनुहुन्छ। तसर्थ सिद्ध पारिन चाहना राख्ने यी प्रत्येकको लागि पहिलो कदम के हुनुपर्छ? सबैभन्दा मुख्य कुरा, तैँले परमेश्‍वरको काम बुझ्‍नैपर्छ। आज, परमेश्‍वरको काममा नयाँ विधि सुरु भएको छ; युग परिवर्तित भएको छ, परमेश्‍वरले काम गर्ने तरीका पनि बदलिएको छ, र परमेश्‍वरले बोल्ने विधि फरक छ। आज, उहाँको कामको तरीका मात्र बदलिएको छैन, युग समेत बदलिएको छ। अहिले राज्यको युग हो। यो प्रेमिलो परमेश्‍वरको युग पनि हो। यो सहस्राब्दीय राज्यको युगको पूर्वानुभव हो—जुन वचनको युग पनि हो, र जसमा मानिसलाई सिद्ध पार्न परमेश्‍वरले बोल्ने धेरै माध्यमहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, र मानिसलाई आपूर्ति प्रदान गर्न फरक-फरक दृष्टिकोणबाट बोल्नुहुन्छ। सहस्राब्दीय राज्यको युगमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै परमेश्‍वरले मानिसलाई सिद्ध पार्न वचनहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहुनेछ र मानिसलाई जीवनको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न दिनुहुनेछ र उसलाई सही मार्गमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। परमेश्‍वरको कामका यति धेरै कदमहरू अनुभव गरेर, मानिसले परमेश्‍वरको काम अपरिवर्तित रहँदैन, बरु नरोकिईकन विकसित हुँदैछ र गहिरिँदैछ भन्‍ने मानिसले देखेको छ। यसलाई मानिसहरूले यति लामो समयदेखि अनुभव गरेपछि, उक्त काम बारम्बार बदलिँदै, निरन्तर परिवर्तन भएको छ। यद्यपि यो जति परिवर्तन भए पनि, मानवजातिलाई छुटकारा दिलाउने परमेश्‍वरको उद्देश्यबाट यो कहिल्यै बाहिर जाँदैन। दश हजार परिवर्तनहरूबाट पनि, यो कहिल्यै यसको मूल उद्देश्यबाट टाढा रहँदैन। परमेश्‍वरको कामको विधि जसरी परिवर्तन भए पनि, यो काम सत्यबाट वा जीवनबाट कहिल्यै अलग हुँदैन। काम गरिएको विधिको परिवर्तनले कामको स्वरूपमा गरिने परिवर्तन, र जुन दृष्टिकोणबाट परमेश्‍वर बोल्नुहुन्छ त्यसलाई मात्र सामेल गर्छ; परमेश्‍वरको कामको केन्द्रीय उद्देश्यमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। प्रभाव प्राप्त गर्नको लागि परमेश्‍वरको स्वरको भाव र उहाँको कामको तरिकामा परिवर्तन गरिएका हुन्। स्वरको भावमा परिवर्तनको अर्थ कामको पछि रहेको उद्देश्य वा सिद्धान्तमा परिवर्तन होइन। मानिसहरूले मुख्यतः जीवन खोज्न परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्; यदि तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस् तर पनि जीवनको खोजी गर्दैनस् वा सत्यको चाहना वा परमेश्‍वरको खोजी गर्दैनस् भने, यो परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास होइन! र अझै राजा हुनको लागि राज्यमा प्रवेश गर्न खोज्नु वास्तविकतापरक हुन्छ र? जीवनको खोजीद्वारा परमेश्‍वरको लागि साँचो प्रेम प्राप्त गर्नु—केवल यो यथार्थता हो; सत्यको चाहना र अभ्यास—यी सबै यथार्थता हुन्। परमेश्‍वरका वचनहरू पढेर, र यी वचनहरू अनुभव गरेर, वास्तविक अनुभवको बीचमा तैँले परमेश्‍वरको ज्ञान लिन सक्‍नेछस्, र साँच्चिकै खोजी गर्नुको अर्थ यही हो।
अगाडि बढ्ने क्रममा, परमेश्‍वरका वचनहरूको चर्चा नै तँ बोल्ने सिद्धान्त हुनुपर्नेछ। साधारणतः, जब तिमीहरू भेला हुन्छौ, तब परमेश्‍वरका वचनहरूलाई आफ्नो अन्तरक्रियाको विषयवस्तुका रूपमा लिएर, यी वचनहरूबारे तिमीहरूलाई के थाहा छ, तिनलाई तिमीहरू कसरी व्यवहारमा लागू गर्छौ, र पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ, यसबारे चर्चा गर्दै परमेश्‍वरका वचनहरू सम्‍बन्धी सङ्गतिमा संलग्‍न हुनुपर्छ। जबसम्म तँ परमेश्‍वरका वचनहरूको सङ्गति गर्छस्, पवित्र आत्माले तँलाई ज्योति दिनुहुनेछ। परमेश्‍वरका वचनहरूको संसार प्राप्त गर्न मानिसको सहकार्य आवश्यक पर्छ। यदि तँ यसमा प्रवेश गरिनस् भने, परमेश्‍वरसँग काम गर्ने कुनै उपाय हुनेछैन; यदि तैँले आफ्नो मुख बन्द राखिस् र उहाँका वचनहरूबारे चर्चा गरिनस् भने, उहाँसँग तँलाई ज्योति दिने कुनै उपाय हुनेछैन। जब तँ अन्यथा व्यस्त भएको हुँदैनस्, परमेश्‍वरका वचनहरूबारे चर्चा गर्, र निरर्थक गफसफमा मात्र नअल्‍मली! तेरो जीवनशैली परमेश्‍वरका वचनहरूले भरियोस्—त्यसपछि मात्र तँ सच्चा विश्‍वासी हुनुहुनेछ। तेरो सङ्गति सतही भए पनि त्यसले फरक पर्दैन। सतहीपन विना कुनै गहिराइ हुन सक्दैन। त्यहाँ प्रक्रिया हुनुपर्छ। तेरो तालिमभरि, तैँले पवित्र आत्माको ज्योति आफूमा लिनेछस्, र परमेश्‍वरका वचनहरू कसरी प्रभावकारी ढङ्गले खाने र पिउने सो थाहा पाउनेछस्। खोजतलासको मध्यान्तरपछि, तँ परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नेछस्। यदि तैँले सहकार्य गर्न अठोट गर्छस् भने मात्र तैँले पवित्र आत्माको काम प्राप्त गर्न सक्‍नेछस्।
परमेश्‍वरका वचनहरूलाई तेरो वास्तविकताको रूपमा नलिईकन, तेरो कुनै यथार्थ कद छैन। जब जाँच लिइने समय आउँछ, तँ निश्‍चित रूपमा पतन हुनेछस्, र त्यसपछि तेरो साँचो उचाइ प्रकट हुनेछ। तर नियमित रूपमा वास्तविकतामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू जब परीक्षाहरूमा पर्छन्, उनीहरूले परमेश्‍वरको कामको उद्देश्य बुझ्न सक्नेछन्। विवेकले युक्त भएका र परमेश्‍वरको लागि तृषित हुनेले परमेश्‍वरको प्रेमको ऋण तिर्न व्यावहारिक कामकाज गर्नुपर्छ। वास्तविकताले युक्त नभएकाहरू झिना-मसिना कुराहरूको सामु पनि दृढ भएर उभिन सक्दैनन्। यथार्थ उचाइ भएकाहरू र नभएकाहरूको फरक यस्तो छ। यसो किन हुन्छ, उनीहरू दुवैले परमेश्‍वरका वचनहरू खाने र पिउने गरे पनि परीक्षाहरूको सामु कोही दृढ भएर उभिन सक्छन्, तर अरू भाग्छन्? स्पष्ट फरक भनेको कोहीसँग यथार्थ उचाइ हुँदैन भन्‍ने हो; उनीहरूको वास्तविकताको रूपमा काम गर्नको लागि उनीहरूसँग परमेश्‍वरका वचनहरू छैनन्, र उहाँका वचनहरूले उनीहरूभित्र जरा गाडेका छैनन्। उनीहरूको परीक्षा लिनसाथ, उनीहरू आफ्नो मार्गको अन्त्यमा पुग्छन्। यसो किन हुन्छ, कि कोही परीक्षाहरूको सामु दृढ भएर उभिन सक्छन्? यसको कारण के हो भने उनीहरू सत्य बुझ्छन् र उनीहरूसँग दर्शन छ, र उनीहरूले परमेश्‍वरको इच्छा र उहाँका आवश्यकताहरूलाई बुझ्छन्, त्यसैले परीक्षाहरूको अन्त्यसम्म उनीहरू दृढ भएर उभिन सक्छन्। यो यथार्थ उचाइ हो, र यो पनि जीवन नै हो। केहीले परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्न पनि सक्लान्, तर तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्दैनन्, तिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्; तिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिनेहरूले अभ्यासमा कुनै महत्त्व दिँदैनन्। परमेश्‍वरका वचनहरूलाई वास्तविकताको रूपमा नलिनेहरू यथार्थ उचाइ नभएकाहरू हुन्, र यस्ता मानिसहरू परीक्षाहरूको अन्त्यसम्म दृढ भएर उभिन सक्दैनन्।
जब परमेश्‍वरका वचनहरू प्रकट हुन्छन्, तैँले तिनीहरूलाई तत्कालै ग्रहण गर्नुपर्छ, र तिनीहरूलाई खानु र पिउनु पर्छ। तैँले जति बुझे पनि, तैँले पक्रनुपर्ने एउटा दृष्टिकोण भनेको उहाँका वचनहरू खानु र पिउनु, बुझ्नु, र अभ्यास गर्नु भन्‍ने हो। तैँले गर्न सक्नु पर्ने कुरा यही हो। तेरो कद कति महान् बन्ला भनेर कहिल्यै विचार नगर्; उहाँका वचनहरू खाने र पिउनेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्। मानिसले सहकार्य गर्नुपर्ने यसैमा हो। तेरो आत्मिक जीवनशैली भनेको मूलतः परमेश्‍वरका वचनहरू खाने र पिउने र तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने वास्तविकतामा प्रवेश गर्न कोसिस गर्नु हो। अन्य कुनै कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु तेरो काम होइन। चर्चका अगुवाहरूले आफ्ना दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूलाई अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ ताकि परमेश्‍वरका वचनहरू कसरी खाने र पिउने उनीहरूले थाहा पाउन सकून्। यो चर्चका हरेक अगुवाको जिम्मेवारी हो। उनीहरू बालक हुन् वा वृद्ध, सबैले परमेश्‍वरका वचनहरू खानु र पिउनुलाई ठूलो महत्त्वको रूपमा लिनुपर्छ र उहाँका वचनहरू उनीहरूको हृदयमा हुनुपर्छ। यो वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुको अर्थ राज्यको युगमा प्रवेश गर्नु हो। आज, अधिकांश मानिसहरू परमेश्‍वरका वचनहरू नखाई र नपिई जिउन नसक्ने अनुभूति गर्छन्, र समय जे भए पनि उहाँका वचनहरू ताजा छन् भन्‍ने अनुभव तिनीहरू गर्छन्। यसको अर्थ उनीहरू सही मार्गमा चल्न सुरु गरेका छन् भन्‍ने हुन्छ। परमेश्‍वरले आफ्ना काम गर्न र मानिसको दिन वचनहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। जब परमेश्‍वरका वचनहरूप्रति जो कोही लालायित र तृषित हुन्छन्, मानवजाति उहाँका वचनहरूको संसारमा प्रवेश गर्नेछ।
परमेश्‍वरले प्रशस्तै बोल्नुभएको छ। तैँले कति बुझेको छस्? तँ कति धेरै प्रवेश गरेको छस्? यदि चर्चका अगुवाले आफ्ना दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविकतामा अगुवाइ गरेका छैनन् भने, उनीहरू आफ्ना कर्तव्यबाट च्युत भएका हुनेछन्, र आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न असफल भएका हुनेछन्! तेरो समझ गम्भीर भए पनि वा सतही भए पनि, तेरो समझको मात्राको बाबजुद पनि, तैँले उहाँका वचनहरू कसरी खाने र पिउने थाहा पाउनैपर्छ, तैँले उहाँका वचनहरूलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ, र तिनलाई खानु र पिउनुको महत्त्व र आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। परमेश्‍वरले यति धेरै बोल्‍नुभएपछि, यदि तैँले उहाँका वचनहरू खाइनस् र पिइनस् भने, वा खोजी गर्ने प्रयास गरेनस् भने वा उहाँका वचनहरू व्यवहारमा लागू गरिनस् भने, यसलाई परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको भन्न सकिन्न। तैँले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने भएकोले, तैँले उहाँका वचनहरू खानु र पिउनुपर्छ, उहाँका वचनहरू अनुभव गर्नुपर्छ, र उहाँका वचनहरूमा जिउनुपर्छ। केवल यसलाई मात्र परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेर भन्न सकिन्छ! यदि तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छु भनी भन्छस्, तर पनि उहाँका कुनै पनि वचनहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न वा कुनै वास्तविकता पैदा गर्न सक्दैनस् भने, यसलाई परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनिदैन। बरु, यो “भोक तृप्त गर्न रोटी खोज्नु” हो। वास्तविकताको सानो अंश समेत नजानी, नगण्य प्रमाणहरू, प्रयोगहीन कुराहरू, र सतही कुराहरूबारे मात्र बोल्‍नु: यिनीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास निर्माण गर्न सक्दैनन्, र तैँले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने ठीक तरिकालाई बिलकुल बुझेको छैनस्। तैँले किन परमेश्‍वरका वचनहरू सम्‍भव भएसम्‍म धेरै खाने र पिउने गर्नुपर्छ? यदि तँ उहाँका वचनहरू खाने र पिउने गर्दैनस् तर स्वर्गमा चढ्न मात्र खोज्छस् भने, के त्यो परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु हो? परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेले चाल्नु पर्ने पहिलो कदम के हो? कुन मार्गद्वारा परमेश्‍वरले मानिसलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ? परमेश्‍वरका वचनहरू नखाई र नपिई तँलाई सिद्ध पारिन सकिन्छ? के तेरो वास्तविकताको रूपमा काम गर्ने परमेश्‍वरका वचनहरू विना तँलाई राज्यको व्यक्तिको रूपमा मान्‍न सकिन्छ? परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नुको अर्थ यथार्थमा के हो? परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेहरू, कम्तीमा पनि, बाह्य रूपमा शिष्ट हुनुपर्छ; सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्‍वरका वचनहरूले युक्त हुनुपर्छ। जे भए पनि, उहाँका वचनहरूबाट तँ फर्केर कहिल्यै टाढा जान सक्दैनस्। परमेश्‍वरलाई बुझ्ने र उहाँका अभिप्रायहरूलाई पूरा गर्ने सबै काम उहाँका वचनहरूद्वारा सफल हुन्छ। भविष्यमा, हरेक राष्ट्र, सम्प्रदाय, धर्म, र क्षेत्रलाई परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा विजय गरिनेछ। परमेश्‍वरले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नुहुनेछ, र सबै मानिसहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई आफ्ना हातहरूमा पक्रनेछन्, र यो माध्यमद्वारा, मानवजाति सिद्ध हुनेछ। भित्र र बाहिर, परमेश्‍वरका वचनहरू सर्वत्र व्याप्त छन्: परमेश्‍वरका वचनहरूमा भित्र र बाहिर दुवै मग्न रहेर मानवजातिले आफ्ना मुखले परमेश्‍वरका वचनहरू बोल्नेछ, परमेश्‍वरका वचनहरू अनुसार अभ्यास गर्नेछ, र परमेश्‍वरका वचनहरूलाई आफूभित्र राख्नेछ। यसप्रकार मानवजाति सिद्ध हुनेछ। जसले परमेश्‍वरका अभिप्रायहरू पूरा गर्छन् र उहाँलाई साक्षी दिन सक्छन्, ती मानिसहरू आफ्नो वास्तविकताको रूपमा परमेश्‍वरका वचनहरूले भरिएका छन्।
सहस्राब्दीय राज्यको युग—वचनको युग—मा प्रवेश गर्ने काम आज समाप्त हुन्छ। अब उप्रान्त, परमेश्‍वरका वचनहरूबारे सङ्गतिमा अभ्यस्त हुँदै अभ्यास गर्। परमेश्‍वरका वचनहरू खाएर र पिएर साथै अनुभव गरेर मात्रै तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा जिउन सक्‍नेछस्। अरूलाई विश्‍वस्त पार्न तैँले केही व्यावहारिक अनुभव पैदा गर्नैपर्छ। यदि तँ परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविकता जिउन सक्दैनस् भने, कोही पनि विश्‍वस्त हुनेछैनन्! परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग गरिएका सबै परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविकता जिउन सक्छन्। यदि तँ यो वास्तविकता देखाउन र परमेश्‍वरलाई गवाही दिन सक्दैनस् भने, पवित्र आत्माले तँमा काम गर्नुभएको छैन, र तँ सिद्ध परिएको छैनस् भन्‍ने यसले देखाउँछ। परमेश्‍वरका वचनहरूको महत्त्व यही हो। के परमेश्‍वरका वचनहरूको लागि तृषित हुने हृदय तँमा छ? परमेश्‍वरका वचनहरूको लागि तृषित हुने सत्यको लागि तृषित हुन्छन्, र केवल यस्ता मानिसहरू मात्रै परमेश्‍वरद्वारा आशिषित हुन्छन्। भविष्यमा, सबै धर्महरू र सबै सम्प्रदायहरूलाई परमेश्‍वरले भन्नुहुने धेरै वचनहरू छन्। बोल्न र उहाँको आवाजलाई प्रकट गर्न अन्यजातिहरूका माझमा उनीहरूलाई विजय गर्न जानुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई पूर्ण पार्न तिमीहरूको माझमा नै उहाँ पहिले बोल्नुहुन्छ र उहाँको आवाज प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँका वचनहरूद्वारा, सबै शुद्ध हृदयले र पूर्ण रूपले विश्‍वस्त हुनेछन्। परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा र उहाँका प्रकाशद्वारा, मानिसको भ्रष्ट स्वभाव घट्छ, उसले मानिसको स्वरूप प्राप्त गर्छ, र उसको विद्रोही स्वभाव कम हुन्छ। वचनहरूले मानिसमा अख्तियारी साथ काम गर्छन् र परमेश्‍वरका प्रकाशभित्र मानिसलाई जित्छन्। वर्तमान युगमा परमेश्‍वरले गर्ने काम, साथै उहाँको कामका मोडहरू, सबैलाई उहाँका वचनहरूभित्र पाउन सकिन्छ। यदि तँ उहाँका वचनहरू पढ्दैनस् भने, तैँले केही पनि बुझ्‍नेछैनस्। उहाँका वचनहरू तैँले आफै खाएर अनि पिएर, अनि तेरा दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूसँगको सङ्गतिको संलग्‍नताबाट र तेरो वास्तविक अनुभवहरूबाट, तैँले परमेश्‍वरका वचनहरूको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। त्यसपछि मात्र तँ तिनको वास्तविकतामा साँच्चिकै जिउन सक्‍नेछस्।
अघिल्लो: परमेश्‍वर देखा पर्नुभएको घटनाले नयाँ युगलाई प्रारम्भ गरेको छ
अर्को: आज परमेश्‍वरको कामलाई बुझ्‍नु
आज तिमीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने र जान्ने प्रयास गर्ने क्रममा, एकतर्फ तिमीहरूले कठिनाइ र शोधनलाई सहनुपर्छ भने, अर्कोतर्फ, तिमीहरूले...
एक व्यक्तिले आत्माका सबै विवरणहरू कसरी बुझ्छ? पवित्र आत्माले मानिसमा कसरी काम गर्नुहुन्छ? शैतानले मानिसमा कसरी काम गर्छ? दुष्टात्माहरूले...